Homeसमाचारधेरै गुलियो खाने बानी छ ? आजै खान छाड्नोस्,यस्ता छन् बेफाइदा
December 23, 2020 admin समाचार 5774
कोही कोही मानिस गु’लियो भनेपछि हु’रूक्कै हुन्छन् । तर, गुलीयो खानेकुरा विष स’मान पनि हुन सक्छ । तत्कालै त्यसले असर नगरे पनि गुलियो खानेकुराले का’लान्तरमा अनेकौँ सम’स्या आइलाग्न सक्छ । आज हामी अ’त्याधिक गुलियो खाँदा हुने हा’नीबारे चर्चा गर्दैछौँ।
लगातार अ’त्याधिक गुलियो परीकार खाए थकान मह’सुस हुन्छ । यस्तो भए शरीरमा ब्लड सु’गरको मात्रा बढेको हुन सक्छ । जति धेरै गुलियो खाइन्छ, त्यति खाने चा’हना बढ्दै जाँदा सुगरको कुलत अर्थात् गुलियो खाने बानी लाग्ने गर्दछ । साथै शरीर र म’ष्तिक बोधो हुँदै जान्छ ।
अत्याधिक गुलियो खाँदा छालामा ग_म्भीर असर पर्दछ । बढी गुलियो खाँदा छाला सु’क्खा हुन्छ । धेरै गुलियो खानेकुराले मुड नि’राश र चिन्तित हुने गर्दछ । अझ कतिपय अ’वस्थामा गुलियोले मानिसलाई बढी आक्रामक र आवे’गात्मक बनाउँछ ।
गुलियोले प्रतिरो’धात्मक प्रणालीलाई दबाउने भएकाले दीर्घ रोग र बारम्बार रुघा लाग्ने स’म्भावना बढाउँछ । चिनी वा गुलियो धेरै भएको खानाले खोकीसमेत लाग्न सक्छ । नियमित गुलियो खाँदै गर्दा अस्वा’भाविक रुपमा तौल बढ्ने गर्दछ । गुलियोले आमा’शयमा समेत असर गरी तौल घट्न’बाट रोक्छ ।– एजेन्सीको सहयोगमा
April 10, 2021 admin समाचार 3921
January 16, 2021 admin समाचार 4996
August 27, 2020 admin समाचार 14264
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (223013)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (215028)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214704)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (212997)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211877)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210823)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209429)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209322)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177986)